Bulshada Soomaaliyeed oo ka walaacsan ciidamada badda ee Itoobiya ay dhisanayso – Radio Daljir
Nofeembar 10, 2018 5:16 b 0
In badan oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo bulshada Soomaaliyeed ayaa walaac xoog leh ka qabo dhismaha ciidamada badda ee xiligaan ay ku howlantahay dowladda Itoobiya, iyadoo ciidamadaasi ay sheegtay inay ka howlgalayaan xeebaha Badda Cas iyo Badda Hindiya.
Isbadalka siyaasadeed ee Geeska Afrika oo uu hormuud ka yahay raysal wasaaraha Itoobiya Abey Axmed ayaa loo arkaa inay jiraan heshiisyo qarsoodi ah oo bulshada aan loo soo bandhigin oo ay galeen hogaamiyeyaasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Eriteriya sida ay rumaysanyihiin in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
“Walwalka aan qabo waxaa weeye in dalkeenna oo 15 Malyan lagu sheego dadkiisa ay si xoog ah oo siyaasad maldahan ay Itoobiya oo 100 Malyan ah ula wareegto, waana sida ay hadda howsha ku socoto,” ayuu yiri Dr Cabdicasiis Sheekh Yuusuf oo horay u soo noqday mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
“Waa inaan caalamka tusnaa saamaynteena gobolka ee dhanka badda ah, dowlado badan oo aad u fog ayaa ciidamadooda badda keenay gobolka , kuwaasi oo muujiyay saamayntooda, inagoo ah wadan wayn oo shacabkiisu ka badanyihiin boqol milyan majirto sabab aan usii ahaano bad la’aan” ayuu yiri kuxigeenka taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya General Berhanu Jula.
Madaxwaynaha Dowladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, raysal wasaaraha Itoobiya iyo madaxwaynaha Eriteriya ayaa kulan sadex geesood ah uu uga socdaa magaalada Addisaba , iyadoo lagu sheegay in looga xaajoonayo dhaqan gelinta heshiiska Asmara ee bishii September ee Itoobiya iyo Eriteriya.
Raysal wasaaraha Itoobiya Abey Axmed ayaa horay uga dhawaajiyay kulan uu kula yeeshay magaalada Muqdisho Soomaaliya iyo Itoobiya inay isku biirayaan oo ay noqonayaan dowlad awood badan.
Soomaali weerar ku dilay afar ruux dalka Australia